မန်းတက္ကသိုလ်မှာတစ်နှစ်တာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » မန်းတက္ကသိုလ်မှာတစ်နှစ်တာ
Posted by Don Juan Ronald on Dec 3, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing | 11 comments
ပန် ကြား လွှာ~~
တ ရုတ် တ ယောက် ရေး သော ပို့စ် ကို ဖတ် ရှု ရာ တွင် က တစ် က အောင့် ဖြစ် နေ မည် ဆို ရင် ကျေး ဇူး ပြု ၍ ကိုယ့် နည်း ကိုယ့် ဟန် ဖြင့် ဗ မာ လို ဘာ သာ ပြန် ပြီး ဖတ် ရှု ကြ ပါ ရန် တောင်း ပန် အပ် ပါ သည် ။
မန်း တက္ကသိုလ် မှာအ ဘယ် ကြောင့် ကျ နော် မျိုး တစ် နှစ် ဘဲ နေ ခဲ့ သ လဲ ဆို ရင် ၊ စ ကား တော့ နဲ နဲ ရှည် သွား နိုင် တယ်။
ဆယ် တန်း မှာ အင်္ဂလိပ်စာ နှင့် ဗ မာ စာ နှစ် ဘာ သာ ပေါင်း အ မှတ် ရှစ် ဆယ် တိ တိ သာ ရ ရှိ ခဲ့ တဲ့ ကျ နော် မျိုး ဟာ ၊ ကော လိပ် နှင့် တက္ကသိုလ် သို့ မ ရောက် သင့် ဘဲ ၊ မ တော် တ ဆ ရောက် လာ တဲ့ ကောင် ဆို လည်း မ မှား ဘူး ပေါ့ ဗျာ။
မြစ် ကြီး နား ကော လိပ် မှာ ၂ နှစ် တက် ပြီး မန်း ကို ရောက် လာ သည် ဆို တော့ မန်း အ ကြောင်း မ ပြော ခင် မြစ် ကြီး နား အ ကြောင်း နဲ နဲ တော့ ပြော ပါ ရ စေ။
တ ချိန် က မြစ် ကြီး နား ကော လိပ် သည် “ ပီ ကင်း ကော လိပ် ” ဟု နာ မည် ရ ခဲ့ ဘူး သည် ၊ အ ကြောင်း သော် ကား ထို အ ချိန် ၌ ရန် ကုန် နှင့် ၎င်း ၏ အနီး တဝှိုက် ( ပဲ ခူး ၊တောင် ငူ ၊ ဇေ ယျ ဝ တီ ၊ ညောင် လေး ပင် ၊ ဖြူး … စ သ ဖြင့် ) မှ ဆယ် တန်း အောင် တ ရုတ် က လေး တွေ အား လုံး နီး ပါး ( F R C သ မား တွေ ) မြစ် ကြီး နား ကို ပို့ ထား ပါ သော ကြောင့် ၊ မြစ် ကြီး နား ကော လိပ် တွင် တ ရုတ် များ နှင့် ပြည့် ကြပ် နေ ၍ “ ပီ ကင်း ကော လိပ် ” ဟု သမုတ် ခဲ့ ကြ ပါ သည်။ ( တနင်္သာရီတိုင်း မှာ ရှိ တဲ့ မြိတ် ၊ ထား ဝယ် က တရုတ် လေး တွေ ကို တော့ တောင် ကြီး ကော လိပ် သို့ ပို့ထား ပါ သည်။)
က ချင် ပြည် နယ် တ ခု လုံး ၊ မန္တလး အ ထက် ပိုင်း အာ လုံး နှင့် မုံ ရွာ အ ပါ အ ဝင် ကျောင်း သား အ များ စု ကို မြစ် ကြီး နား သို့ ပို့ ထား ပါ သည် ၊ အ ထူး သ ဖြင့် ရွှေ ဘို ကျောင်း သား ( က တုံး အ ဖွဲ့) သည် မြစ် ကြီး နား ကော လိပ် တွင် နာ မည် ဆိုး များ သွင် ကျန် ခဲ့ ပါ သည်။
ရန် ကုန် က ဆ ရာ သ မား များ ( ရန် ကု န် ကျောင်း သား ဖြစ် တဲ့ သူ ငယ် ချင်း များ ) တွေ ရဲ့ အ ဆို အ ရ နိုင် ငံ ခြား သွား ဖြစ် ခဲ့ ရင် ကိုယ့် ဘွဲ့ လက် မှတ် လေး ဟာ R A S U ဘွဲ့ မှ ကောင်း တာ တဲ့ ဗျ ၊
အ ထူး သ ဖြင့် မော် ကွန်း ထိမ်း အန် တီ ဒေါ် စိန် စိန် ရဲ့ Sign က လေး ( အဲ ဒီ တုံး က အ ပြော လေး ပေါ့ ဗျာ၊ Double Daimonds သို့ မ ဟုတ် Diamond-Daimond တဲ့) ပါ ဘွဲ့ လက် မှတ် လေး နဲ့ မှ ၊ အ ကယ် ၍ ဒုတိယ နှစ် အောင် ပြီး ၊ ရန် ကုန် transfer လုပ် ချင် ရင် Major subject မှာ အ နည်း ဆုံး grade4ရ မှ လျှောက် လို့ ရ တာ တဲ့ ၊ အဲ တော့ ကျ နော် မျိုး ဟာ F R C သ မား စစ် စစ် ( ရေ မ ရော) ဆို တော့ ၊ တ ချိန် ချိန် ကြ ရင် နိုင် ငံ ခြား မ သွား ဖြစ် ဘူး လို့ ဘယ် ပြော နိုင် မှာ လဲ ၊ R A S U ဘွဲ့ လေး တော့ ပိုင် ထား ချင် တာ ပေါ့ ၊ ဟုတ် တယ် ဟုတ် ?
င ဖျင်း ဆို တဲ့ ကျ နော် ဟာ ဒု တိ ယ နှစ် မှာ ဖင် ပြဲ အောင် ကြိုး စား ပါ တော့ သည် ၊ ကံ ကောင်း ထောက် မ ၍ ၊ ကျ နော် မျိုး သည် ပွတ် ကာ သီ ကာ grade4လေး ကို ရ ရှိ လိုက် ပါ ၏ ၊ တ တိ ယ နှစ် ကျောင်း ဖွင့် ချိန် တွင် ၊ တ ခါ မျှ မ ရောက် ခဲ့ ဘူး သော မ ဟာ ရန် ကုန် ကြီး ကို ရောက် ရှိ သွား ကာ R A S U transfer လျှေက် လေ သ တည်း ၊ အ ချိန် တ လ ကျော် ခန့်ကြာ သွား သော် လည်း အ ချည်း နှီး သာ ဖြစ် ခဲ့ ပါ သည်။
စိတ် ဓါတ် ကျ စွာ နဲ့ မန်း တက္ကသိုလ် ကို ကျောင်း ပြန် လာ တက် ရ ပါ သည် ၊ ဒါ ပေ သည့် အဲ ဒီ R A S U ဘွဲ့ ကို ရ ဖို့ စိတ် မ သေ သေး ပါ ၊ တ တိ ယ နှစ် မှာ Major subject ကို grade4ရ အောင် ကြိုး စား ပြီး ၊ စတုတ္ထနှစ် တွင် Marine အ ထူး ပြု ဖြင့် မော် လ မြိုင် ဒီ ဂ ရီ ကော လိပ် မှာ သွား တက် ရောက် ခဲ့ ရာ Diamond Daimond ပါ တဲ့ လက် မှတ် လေး ကို မ ရ ၊ ရ အောင် လုပ် ယူ ခဲ့ ပါ သည်။
ဝမ်း နည်း ဖို့ကောင်း သည် မှာ နိုင် ငံ ခြား သို့ ထွက် ဖြစ် သော် ငြား လည်း ၊ ၎င်း ဘွဲ့ လက် မှတ် လေး ကို notary လုပ် ချိန် က လွှဲ ၍ ၊ ယ ခု ချိန် ထိ တ ခြား တ တိ ယ လူ ၊ မည် သူ့ ကို မျှ ပြ သ ခွင့် မ ရှိ ခဲ့ ပါ ၊ များ စွာ သ နား စ ရာ ကောင်း ပါ ပြိ ။
ဆို ခဲ့ တဲ့ အ တိုင်း ရန် ကုန် transfer မ ရ တော့ မန်း ကို ပြန် လာ တာ ပေါ့ ၊ ကံ ကောင်း သည် ကား ကျ နော် ဆို တဲ့ ကျ နော် ဟာ ဇေ ယျာ ဆောင် တွင် နေ ရ ပါ သည်။
မနာ္တလာ ဆောင် နဲ့ ဇေယျာ ဆောင် ဟာ တ ပုံ စံ တည်း ဆာက် ထား ပါ သည် ၊ ပျဉ် ထောင် ဆောင် ဖြစ် ပြီး ၊ နှစ် ထပ် ဖြစ် ပြီး သုံး ဆောင် ပြိုင် ဆောက် ထား ပါ သည် ၊ စားဖို ဆောင် သည် သတ် သတ် ဖြစ် ပါ သည်။
အ ခန်း ဖွဲ့စည်း ပုံး သည် ၊ အ ဆောက် အ ဦး က ပျဉ် ထောင် ဆို တော့ အ ခန်းများ ကို လည်း ပျဉ် ပြားတွေနဲ့ကာ ထား ပါ သည် ၊ သို သော် အ ခန်း တ ခု နှင့် တ ခု အ လုံ ကာ ထား ခြင်း မ ဟုတ် ဘဲ အ ပေါ် ပိုင်း တစ် ပေ လောက် ကို သံ ဇ ကာ အ ကျဲ ဖြင့် ကာ ရံ ထား ပါ သည် ၊ ဆို လို သည် မှာ အပေါ် ပိုင်း ကနေ ကြည့် လျင် ဘေး အ ခန်း မှာ ဘာ လုပ် နေ တယ် ဆို တာ အ ကုန် တွေ့ရ ပါ မည် ၊ အ ခန်း တွေ တော့ ကျယ် ပြီး နေ လို့ ကောင်း ပါ သည်။
အောင် မင်္ဂလာ ဆောင် နှင့် ရွှေ ပြည် အေး ဆောင် သည် တိုက် ခန်း များ ဖြစ် ပြီး အလုံ ပိတ် ဖြစ် ပါ သည် ၊ တံ ခါး ပိတ် ပြီး အ ခန်း တွင်း ၌ ဘာ လုပ် လုပ် ဘေး လူ ကို မ နှောက် ယှက် မိ ပါ ၊ ထို ကြောင့် သ တိ္တ ရှိ သော ကျောင်း သား တ ချို့ သည် အခန်း တွင်း ဖဲ ဝိုင်း များ ထောင် ခြင်း ၊ အ သံ တိတ် ရုပ် ရှင် သေး ( Black & White Blue picture ဟု ခေါ် သည့် ညစ် ညမ်း ရုပ် ရှင် သေး ) များ ပြ သ ချင်း ကို အတင့် ရဲ စွာ ပြု လုပ် ကြ ပါ သည် ။
သို့ သော် လည်း အ ဆောင် သည် သုံး ထပ် တိုက် ဖြစ် ပြီး အ ခန်း အ နည်း ငယ် ကျဉ်း သည့် အ တွက် ကျောင်း သား အ များ စု သည် ဇေ ယျာ နှင့် မနာ္တလာ ကို ပို ၍ နှစ် သက် ကြ ပါ သည်။
နဒီ ဆောင် ကို တော့ မ ပြော ကောင်း တော့ ပါ ၊ နဒီ ဆောင် သည် ဝါး ထ ရံ ဖြင့် ကာ ရံ ထား သည် လေ ဝင် လေ ထွက် ကောင်း သည့် ပြင် ၊ အ ခန်း သည် များစွာ ကျယ် ဝန်း သော် လည်း တစ် ခန်း တွင် ကျောင်း သား ဦး ရေ ဆယ် ယောက် ထက် မ နည်း စု ပေါင်း ပြီး နေ ရ ပါ သည် ၊ ဤ အ ဆောင် ကို နယ် ကော လိပ် များ မှ ရောက် လာ သော တတိယ နှစ် ကျောင်း သား ကို အ များ ဆုံး ထား ရှိ ပါ သည် ၊ စတုတ္ထ နှစ် ရောက် ရင် အား လုံး ကို အောင် မင်္ဂလာ သို ့သွား ရ ပါ သည် ၊ နဒီ ဆောင် အ ခန်း များ အ တွင်း ကျောင်း သား အ ချင်း ချင်း အ ကုန် တွေ့ မြင် ကြ ရ သည့် အ တွက် မ ကောင်း မှုလုပ် ၍ မ ဖြစ် ပါ ၊ သို သော် နယ် စုံ မှ ရောက် လာ တဲ့ စ ရိုက် ပေါင်း စုံ များ အ ချင်း ချင်း နှီး နှော ဖ လှယ် ၊ သင် ကြား ၊ ပို့ချ ၊ ပြ သ ဖို့ ကောင်း သော hall ကြီး ဖြစ် ပါ လေ တော့ သည် ခင် ဗျား ။
ရွှေ ပြည် အေး ဆောင် သည် ၊ လေး နှစ် စ လုံး မ န်း တက္ကသိုလ် မှာ နေ သော ကျောင်း သား အ များ ဆုံး ထား ကြ ပါ သည်။
အား လုံး ကျမ်း မာ ရွှင် လန်း ကြ ပါ စေ~~
ကျေး ဇူး တင် ပါ သည် ။
Don Juan Ronald ရေ တောင်းပန်ပါတယ်
ဦး Don Juan Ronald ပေးလေ့ရှိသော ကွန်မင့် များ ဖတ်ဖူးသည့်အတွက်ယခုလည်း
မန်းတက္ကသိုလ် အလွမ်းပြေအကြောင်းတွေကို ဒီလိုပုံစံနဲ့တော့ အားမပေးချင်ပါဗျာ..
ဒိထက်ကောင်းတဲ့ ကျောင်းသားဘဝဟာသတွေ ရှိဦးမယ်ထင်ပါတယ်..
ူအခုတော့ ရွာထဲ မတင်သင့်တဲ့ ပို့စ်လို့ ပဲ ကိုရင်မောင်နဲ့ အမြင်တူပါတယ်..
နေပါစေဗျာ။ တမင်တကာ လိင်စိတ်နှိုးဆွအောင် ရေးတာမှ မဟုတ်တာပဲ။ လူကိုခင်ရင် မူကိုပြင်တာ နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ မန်းဂေဇက်က ဘာမိုလို့ ပိုထူးချင်ယောင်ဆောင်ရမှာလဲ။
ဒါနဲ့ ဦးဒွန်ဓာတ်ပုံကြည့်ရတာ တရုတ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း တိန့်ရှောင်ဖိန်နဲ့ ဆင်သလိုပဲ။ အမျိုးတော်သလား။။။။။
ပို့စ်ထဲမှာ သတ္တဝါပုံလေးတွေ ပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သလဲ ပြောပါအုံး။ ဦးဒွန်ပုံလေးတွေက ပိုစုံတယ်။။။။။
လေးစားအပ်သော၊မာမာနဲ့မွှေးတဲ့ဆရာကြောင်ကြီးခင်ဗျား၊ပုံက ဦးတိန့်ရှောက်ဖင် ၏ပုံဖြစ်ပါတယ်။
သူဘဲ Any ကြောင်ဖြူကြောင်နက်ကြွကဖမ်းနိုင်ရင် the best ! ပြောခဲ့တာပေါ့၊
သတ္တဝါပုံတွေကcctv ရဲ့ website မှာရှိတဲ့ program တခုခုရဲ့ကွန်မန့်အကွက်မှာရှိတယ်၊
ဦးကြောင်ပြောလို့ဝင်မန် ့ဦးမယ်။ ဒါကဟာသ သက်သက်ပါ။ ပြောလည်းပြောထားတယ် ၁၈ နှစ်အောက်နဲ့မိန်းကလေးများ မဖတ်ရလို ့။ ခုခေတ်လူငယ်တွေကြားမှာ အဲဒီလို ဟာသကရိုးနေပါပြီ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတွေများ သိလိုက်တာစုံလို ့။ ကိုယ့်ကိုတောင် လာလာပြောသွားတယ်။
ခရီးသွားနေတဲ့ အချိန်မို့ အခုမှ ဖတ်လိုက်ရပါသည်။
မန်းတက္ကသိုလ် အကြောင်း ပြန်ပြောသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဖျက်လိုက်သော ပို့စ်ကို မဖတ်လိုက်ရပါ။
သန့်ရှင်းသော အပျော်လေးများကို ရေးစေချင်ပါသေးသည် ဆရာ ခင်ဗျား။